« Mandry amim-piadanana »
Efa taonjato maro izay no niandrandran'ny Kristianina ny fiverenan'i Kristy. Izany tokoa ny fara-tampon'ny finoantsika- tsy ny antsika ihany, fa ny fanantenan'ireo nahatoky tamin'Andriamanitra teo amin'ny tantara.
Vakio ny Heb. 11:13-16. inona ny teny fikasana eto izay tsy ho an'ny olona fahiny ihany fa ho antsika koa?
Tsy misy heviny ireo andininy ireo raha toa ka marina ny filazan'ny olona, izay iraisan'ny maro, mikasika ny fahafatesana. Inona no ambaran'ireo andalan-teny ireo momba ny olona izay "tsy mbola nahazo ny teny fikasana?" Nodimandry izy ireo, ary heverin'ny olona fa any an-danitra ankehitriny mifaly amin'ny valisoany miaraka amin'i Jesôsy. Raha nodimandry i Billy Graham dia imbetsaka no nandrenesantsika ny fanambarana fa efa any amin'ny Paradisa miaraka amin'i Jesôsy izy.
Misy toe-javatra toy ny maneso ihany koa, mikasika izany fomba fijery izany, satria rentsika matetika izao fiteny izao rehefa misy olona nodimandry: "handry amim-piadanana anie izy". Fa inona no mitranga? Moa ve ireny olona ireny mandry amim-piadanana tokoa, sa any an-danitra manao izay tokony hataony rehetra (toy ny hoe mijery ny "zava-misy" ety ambonin'ny tany)?
Ahoana ny filazan'i Jesôsy ny fahafatesana? Vakio ny Jao. 11:11.
Raha ny marina, ny hevitra mikasika ny hoe mandry "amim-piadanana" no marina momba ny fahafatesana, sa tsy izany? Matory tokoa ny maty. "Ho an'ny mino, dia zavatra kely ihany ny fahafatesana. Fotoana fohy no ilazan'i Kristy an'izany. Raha misy olona mitandrina ny teniko, dia tsy mba hahita fahafatesana izy mandrakizay.' Ho an'ny Kristianina, torimaso fotsiny ny fahafatesana, fotoana ao anatin'ny fanginana sy ny haizina. Ny fiainana dia miara-miafina amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra, ary raha hiseho Kristy fiainantsika, dia hiara-miseho Aminy koa amin'ny voninahitra hianareo. Jao. 8:51, 52; Kôl. 3:4."- IFM, t. 846.
Ampitahain'i Jesôsy amin'ny torimaso lalina ny fahafatesana mandra-pahatongan'ny marainan'ny fitsanganana amin'ny maty (Jao. 11:11, 14), asongadiny ihany koa fa samy handray ny valin'asany aorian'ny fitsanganana amin'ny maty ireo voavonjy sy ireo izay very (Jao. 5:28,29). Nasongadiny ny filana ny fiomanana ho amin'ny fahafatesana, na oviana na oviana no hahatongavan'izany.
Inona ny fampaherezana azonao avy amin'ny fahafantarana fa mitsahatra ireo olon-tianao efa nodimandry?